izithuthi eziziqhubayo Oovimba - Funda ukuRhweba
tag: iimoto ezizisebenzelayo
I-Ambarella ibonelela ngombono onenzuzo kwii-autos kunye neekhamera zokhuseleko
Ukuhlaziywa: 15 April 2021
Umyili wekhompyuter we-chip yoyilo u-Ambarella (AMBA) unokuba ngumdlali we-niche kwicandelo le-chip, ngentengo yentengiso ye-3.6 yezigidigidi, kodwa isoyikisa ngokukhawuleza ukuba ibe ngumdlali obaluleke ngakumbi.
Iinkampani zokukhula ezithembisa ijam ngomso zizinto ezidinisayo zophando lwesitokhwe, kodwa kwimeko ye-Ambarella kukho ubungqina bokuqikelelwa kokukhula kwengeniso okuhambelana nobungqina obukhoyo bokuthengiswa kwentengiso.
I-Ambarella inefom, hayi kangako ekuthembiseni ukungathembeki njengokungalandeli ukulandela ubuchwephesha bayo. Oku mhlawumbi kubonakala kwindlela yonyawo ngabaphathi, njengoko kubonakala ngathi kuguqula ukujolisa kwenkampani ukusuka kwelinye ithuba lokukhula liye kwelinye, ngaphandle kokuwaqonda ngokupheleleyo amathuba abesele echongiwe ngaphambili. Ngokuqinisekileyo le yayiyimeko yoxinzelelo lwangaphambili kwiidrones, umzekelo.
Nangona kunjalo, inkampani ngoku ibeke umbono, ukuba uyafuna, ngekamva layo apho iikhamera zobuchwephesha zobuchwephesha, iikhamera zokhuseleko lwasekhaya kunye neenkqubo zekhamera yeemoto ziya kuba lelona galelo likhulu kwingeniso kunye nokukhula kwenzuzo ukuya phambili. Inkampani ilindele ikota yengeniso ukuba ivele kwicandelo le-'IoT edge endpoint 'yentengiso yayo iyonke kwiimveliso zekhompyuter.
Iiyunithi eziphezulu zeiyunithi kwi-IoT
Imarike yokugqibela ye-IoT ihleli kwisiseko sepiramidi, ngokwembono ye-Ambarella, kwaye kulapho imilinganiselo yeeyunithi eziphezulu ikhoyo xa ithelekiswa nomphezulu wepiramidi apho amaziko edatha ahlala khona kunye necandelo eliphakathi elithatha unxibelelwano lwee-computing zeseva.
Iiphetho zokugcina ze-IoT- ngesiNgesi esicacileyo sithetha nje i-Intanethi yezixhobo ezinje ngeekhamera zokubona ezimele ukuphela kwetyathanga xa kuthunyelwa kunye nokwamkelwa kwedatha- kufuna uyilo olwahlukileyo ngokusisiseko ngokuchasene neseva esekwe kumnatha womnatha kunye nendawo yolwazi.
Kwaye le yindawo kanye apho u-Ambarella angene khona, apho amandla asezantsi, amandla asezantsi (ixesha elithathwayo ukwenza unxibelelwano), ubumfihlo kunye nokhuseleko bakwi-premium ebalulekileyo nalapho inkampani inegunya elingenakuthelekiswa nanto.
Ukugxininisa isikhundla sayo sentengiso esomeleleyo kukuqhekeka kwesihlobo okubonwe kwiminikelo ebonakalayo kwi-AI ebonakalayo [iimveliso zobukrelekrele bokuzenzela] ezivela kubakhuphiswano bayo.
Umzobo ongezantsi ovela kwinkcazo-mali yamva nje ye-Ambarella ibonisa inqaku:
Inkampani nguvulindlela kuxinzelelo lwevidiyo kunye nemifanekiso ukusukela ekusekweni kwayo ngo-2004 kunye nokufunyanwa kweVisLab ngo-2015, inkokeli kuphuhliso lwezicelo zokuqhuba ezizimeleyo eziphume kwiDyunivesithi yaseParma ngo-2009, yongeze kakhulu kwiinkqubo zayo ezizimeleyo zobuchule.
Ngokukodwa, i-Ambarella ijolise kwithuba elizimeleyo lemoto. Kubekho umdla omkhulu kubatyali zimali kwiinkqubo ze-LiDAR zezithuthi ezizisebenzelayo, kodwa mhlawumbi hayi ingqwalaselo engako enikwe kwimiboniso esekwe kumbono wekhompyuter, ezo zixhaphake kakhulu kwizithuthi zemveliso zangoku kwaye ezo zisephantsi kophuhliso kunezinye iintlobo izivamvo 'zokuqonda'.
Iiprosesa zenethiwekhi ze-Ambarella zeCVflow zenethiwekhi
Ngenxa yoko, iya kuba ziikhamera eziza kuvelisa uninzi lweedatha ezijolise kukuqonda. Xa kuziwa ekusetyenzisweni kwedatha ye-Ambarella yedatha yeeprosesa ezinzulu zikhokela abaphikisi, nto leyo icacisa ukuba kutheni ikiti yayo yeCVflow ifumana abathengi abazimiseleyo kwiimarike ekujoliswe kuzo (jonga isilayidi esingezantsi), kubandakanya iMercedes Benz, iNissan, iHonda neMotional. I-Motional idibene neLyft ukukhupha inethiwekhi enkulu ye'Robotaxi 'kwihlabathi liphela.
Ke ngawaphi amanani ngokokuhlawula abathengi? Ukusukela nge-31 ka-Okthobha i-2020, yengeniso yobomi eqikelelweyo (okt umthengi ngamnye) ye- $ 600 yezigidi, i-65% yeekhontrakthi ziphumelele ngentsalela engama-35% kumbhobho kwinqanaba lokubhida, ngokuka-Ambarella.
Yongeza kuleyo ingeniso evela kwiikhamera zokhuseleko ezivelisa idatha yomatshini kunye nokubukela kwabantu, leyo inkampani eqikelela ukuba iya kuba ne-60% yengeniso kwi-2021 yezemali, emva koko akunzima kangako ukubona ukungqubana okubalulekileyo kwintengiso kwikota ekufuphi nangaphaya.
Ingeniso yokubetha kwi-Q4 kunye nezikhokelo zemali ze-Q1
Ambarella (AMBA) itshathi yexabiso, amakhandlela eentsuku ezi-1 nge-15 Apreli 2021. Itshati ngoncedo lwe-TradingView
Ewe kunjalo, ixabiso lesitokhwe latsiba i-8% ekuqaleni kuka-Matshi xa inkampani yabika iziphumo zekota yesine kunye nezikhokelo ezibetha kwimali ye-Q1 yezemali.
Ingeniso yekota yesine inyuke nge-9% ukuya kwi-62.1 yezigidi zeedola, ibetha imvumelwano eqikelele ukufundwa kwe- $ 57.7 yezigidi.
Kwi-Q1 i-Ambarella ithi ingeniso kufuneka ingene phakathi kwe- $ 67 kunye ne- $ 70 yezigidi, ejikeleze i-18% ephezulu kunabahlalutyi abafake ipensile kwi- $ 56.2 yezigidi.
Ukuqinisekisa uhlalutyo lwethu apha ngasentla, inkampani iqinisekisile ukuba amanani aziziphumo zokukhawulezisa imfuno yeemveliso zombono wekhompyuter ye-AI.
Ingeniso yesabelo ngasinye yayintle kwi-Q4 yezemali kwi-0.14 yeedola, eyona nto ibalulekileyo kubaqikelelo babahlalutyi be- $ 0.08, kodwa inkampani ayenzanga nzuzo ukusukela ngo-2018, nge-EPS kumbono wonyaka ekungalindelwanga ukuba ihambe kakuhle kude kube li-2022.
I-Capex iye yehla kule minyaka mithathu idlulileyo, iphakamisa ukuba okuninzi kokuphakamisa okunzima ukuya kutyalo-mali kwi-R & D ukuphuhlisa iinkqubo ze-CVflow AI sele kwenzekile, nangona kulindeleke ukuba iphinde inyuke kulo nyaka - njengoko kulindelwe kukukhula inkampani ngokujolisa kwiimarike ezintsha.
Ixabiso ekuvunyelwene ngalo le- $ 129 ukusuka kubahlalutyi abali-18 abagubungela isitokhwe simele i-27% inyuke ngexabiso lokuvalwa kwe- $ 101.64 nge-14 ka-Epreli.
Ingeniso ngo-2020 yayizi- $ 228 yezigidi kwaye kuqikelelwa ukuba iza kukhula ngokukhawuleza kwiminyaka elandelayo (jonga kwitheyibhile engezantsi).
Unyaka 2022 2023 2024
Ingeniso 280.9 26.0% 326.2 16.1% 410.5 25.8%
Nangona i-beta ingu-1.42 kwaye ixabiso lithengisiwe lisezantsi ukusukela ekuprinteni i-intraday ephezulu ye- $ 137 nge-3 ka-Matshi, ixabiso langoku kufuneka libe yindawo elungileyo yokungena kubatyali mali bexesha elide ukuya kweliphakathi ngeliso kumathuba akhulayo akhoyo phambili isithuba sokuncedisa abaqhubi (ADAS) isithuba.
I-Ambarella inokuthengwa kwiqonga lotyalo-mali lwe-eToro nge-0% yekhomishini.
tags Ambarella, izithuthi ezizimeleyo, isitokhwe se-chip, umbono wekhompyutha, microprocessors, iimoto ezizisebenzelayo
Thenga iGeely emva kokuba isivumelwano seBaidu kunye neTencent sidala ukuba yintshatsheli ye-EV
Umdyarho wokulawula ishishini lesithuthi sombane (i-EV) sele uqalile nje, kwaye ukuza kuthi ga ngoku iGeely yase China ayikhathalelwa njengeyona nto iphambili. Ngokuqinisekileyo i-Tesla yindlela yokuphuma ngaphambili, kodwa ukuba ugqatso sele luqalisile, loo nto inzuzo yokuhamba kwangoko ayinakuba yiyo yonke into ebonakalayo.
Omnye umntu waseTshayina obangisana naye, uNio, uthathwa njengomnye wabakhuphiswano abaphambili beTesla, kwaye ukugweba ngoqingqo-maxabiso lwalo, abatyali mali bacinga njalo njengoko benikezela ixabiso labo ngomsindo.
Kodwa iingxelo zokuba iApple izimisele malunga nee-EVs ezizimeleyo kwaye ijonge amaqabane azenzekelayo phakathi kwabavelisi 'belifa'.
Ukuba ukuxabisa kukaNio noTesla kujongeka njengokutyebileyo - enokuthi ibe yinto engeyiyo - ke iGeely's (eyona automaker inkulu yase China) inomtsalane ngakumbi, kwaye ngaphambi kokuba siqwalasele ubudlelwane bayo obutsha kunye nabadlali beTshayina iBig Tech.
Ababukeli be-EV bayakuyiqaphela le patheni intsha yokuvela kokuchumisa phakathi kwesikolo esidala kunye nesikolo esitsha, kunye nelifa lezinto ezinkulu ezinje ngeqela le-GM kunye noMicrosoft kunye noApple ekuthiwa basebenzisana neHyundai yaseKorea. Omabini amacala aloo equation atsalela amandla omnye komnye kwinto enokuba ngamalungiselelo ancedisayo okuzisa ii-EVs ezizimeleyo ebantwini.
U-Apple ufumana ulwazi lokwenziwa kwemoto yakwaHyundai ngelixa iHyundai inyusa ukuthembeka kwe-Apple kunye nolwazi lwayo olunzulu kuyilo lwehardware kunye nolawulo lwentengiso.
I-Geely iyizisa ndawonye kunye neenzuzo zokuqhuba ngokwakho i-EV
UGeely wenza into efana ne-GM, kwi-tie-ups yakhe nenkampani ye-China yokukhangela i-Baidu kunye netekhnoloji enkulu ye-Tencent. Ngendlela efanayo yokuba uGM afikelele kulwakhiwo lweMicrosoft yeAzure Cloud kunye nobuchwephesha be-AI, uGeely uzimisele ukukhwela izibonelelo zokuqhuba ngokuzimeleyo kweBaidu kunye nenkxaso yeAI uApollo kunye nelifu likaTencent kunye neshishini lesoftware ukunika amandla amabhongo okuqhuba kunye nokusetyenziswa kwezithuthi ezikrelekrele. .
I-Apollo yasekwa nguBaidu kwi2017 kwaye sele inolwalamano noGeely kwanangaphambi kweendaba zobambiswano zamva nje. Itekhnoloji yokuqhuba ngokwakho ihamba phambili kwintengiso (yesibini kuphela kuGoogle's Waymo), ukuba inani leenkampani ezicofa ubuchwephesha bayo yinto edlulayo. Ukuthatha indlela evulekileyo yokuvula efana nale yenziwe nguGoogle nge-Android, i-Apollo yeBaidu ibonelela ngetekhnoloji kwamanye amagama aphambili kushishino lweemoto lwehlabathi, njengeFord, iToyota kunye neVolkswagen. Kodwa isivumelwano sokwenza iimoto ngeGeely lelokuqala kwaye kuphela lelo linge.
I-Geely ithengisa uninzi lwemveliso yayo e-China, iyeyona mveliso inkulu elizweni. Amabhongo alo abanzi. Ngo-Septemba wonyaka ophelileyo ityhile uyilo olutsha lwe-EV-olubizwa ngokuba yi-Sustainable Experience Architecture (SEA) - ngenkqubo yebhetri ehambisa umgama we-700km. Inkampani ikwiingxoxo malunga nelayisensi ye-SEA eya kuDaimler (umnini weMercedes-Benz). UGeely ungumnini wohlobo lweSweden uVolvo (owawufumana kwaFord ngo-2010) kunye neLotus.
Inkampani yaseGeely uLynk (ejolise kubaqhubi abancinci) iya kuba yeyokuqala ukwakha kulwakhiwo olutsha lwe-EV. Olunye uphawu lwalo lombane luphawu oluphezulu lwePolestar, uphawu lwenkqutyana yeVolvo.
I-China yeyona ntengiso inkulu ye-EV kwihlabathi liphela kwaye urhulumente ebenyanzelisa inkxaso-mali ukomeleza intengiso njengenxalenye yesicwangciso sayo esenziwe e-China 2025, ejolise ekuboneni ilizwe liphumelela kwi-10 amacandelo obuchwephesha, enye yazo zizithuthi zamandla amatsha (ii-NEVs).
Imiqobo yezobuchwephesha ekusafuneka yoyiswe ukuzisa iimoto eziqhuba ngokwakho ngokukhuselekileyo ezindleleni zethu zihlala zibalulekile, kodwa ukuba kukho ilizwe elinye elinokuthi liphumelele ngaphambi kwalo naliphi na elinye yi China. Kungenxa yokuba izithuthi ezizimeleyo ziya kuxhomekeka kwiziseko ezixineneyo zeenzwa kunye nezinye izixhobo ze-intanethi zezinto, kunye nenethiwekhi ye5G kunye namaqonga amafu kunye neenethiwekhi ezisemthethweni (blockchain) zonke zisebenza kunye kwimigangatho efanayo. Akukho miqondiso yokuba inkokeli yezobuchwephesha, i-US, okanye iYurophu naphina zikufuphi nenjongo, kwaye iJapan isilele ngasemva. Olunye ulwahlulo lwezixeko ezidibeneyo kunye neendlela ezifanelekileyo kusenokwenzeka ukuba nguMzantsi Korea, kodwa imakethi incinci, nangona ichaza ukuba kutheni iApple iphonononga ubuhlakani neHyundai.
Isitokhwe seGeely sitshiphu ngokuthelekisa noTesla kunye noNio
IGeely ithengisa ngalo lonke ixesha kodwa iyabiza xa ithelekiswa neTesla (okanye iNio), ene-sedate PE multiple ye-40 vs Tesla's 130.
Iimpawu zeGeely Auto kunye neLynk & Co ngokudibeneyo zithengise iiyunithi ezili-1,320,217 ngo-2020, ukonyuka okumangalisayo ngonyaka-nge-2% kunikwe ikota yokuqala yokuvalwa kweCovid. I-Geely ilindele ukonyusa ukuthengisa nge-16% kulo nyaka. Nangona uninzi lwentengiso yayo ikwiimarike zasekhaya, apho ithengisa khona kakhulu, ithumela ngaphandle iimoto ezingama-72,700 ngo-2020.
U-Lynk wangena kwimarike yaseYurophu ngo-Okthobha u-2020, xa wazisa umfuziselo wombane opheleleyo wombane. U-Lynk usete irekhodi yokuthengisa ngokulandelelana kwezi nyanga zintandathu zidlulileyo, ukuza kuthi ga ngoku ukuthengisa iiyunithi ezingama-400,000.
Ngoku ithengisa isithuthi esingumxube- iLynk & Co 01 eYurophu. Into enomdla kukuba, i-crossover ithengisa kwimodeli yokubhaliselwa yenyanga, ixabisa i- $ 456 ngenyanga. Loo ntlawulo iyancitshiswa ukuba ukhetha ukwabelana ngemoto namanye amalungu enethiwekhi yaseLynk (ubulungu bukhululekile) Umbhalisi angazibekela amaxabiso ezabelo. Kwakhona ikhonkco elingumxube lakhiwe ngaphezulu kolwakhiwo olufanayo njengeVolvo XC40.
IGeely Automobile Holdings iyathengisa kwimakethi yesitokhwe yaseHong Kong, okwangoku inexabiso kwi-HKD33.32 nase-US njenge-ADR (GELYY), okwangoku inexabiso lama- $ 87.
Ungathenga izabelo zeGeely ezidweliswe kwintengiso yekhomishini yaseHong Kong ngaphandle kweqonga lotyalo-mali lwe-eToro.
Thenga iGeely kwi-eToro
tags zithuthi, Izabelo ze-EV, ngokukhawuleza, iimoto ezizisebenzelayo, tesla